एकाबिहानै मेयर बालेनले निकाले अर्को कमालको आइ’ डिया, काठमाडौं देखि भ्याली बाहिरसम्मै वाह-वाही ! – Ap Nepal
एकाबिहानै मेयर बालेनले निकाले अर्को कमालको आइ’ डिया, काठमाडौं देखि भ्याली बाहिरसम्मै वाह-वाही !
काठमाडौं । पछिल्लो समय ब्या’क टु ब्याक जनताको मन जित्ने र निर्णय का’ र्यान्वयन गर्दै आएका काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहले अर्को कमा’ लको आइडिया निकालेका छन् । काठमाडौंको मुख्य समस्या बनेको फोहोरको व्य’वस्थापनलाई लिएर बालेनले एका,बिहानै निकालेको आइ’डियाले काठमाडौं भ्याली देखि भ्याली बाहि’रसम्म प्रशं’सा पाएको हो ।
बालेन सि’ सडोलबासीको हितका लागि सिस डोलमा रं’गशाला र पार्क बनाउन आफूहरूले चाहेको बताएका छन्। आज बिहान एन्फाका पंक’।ज;विक्रम नेम्वाङसँगको भेटमा उनले सिसडोलको फोहोर व्यवस्थापन गरी त्यहाँ रंगशाला र पार्क बनाउने चाहना रहेको बताए।
काठमाडौंबाट सि’सडोल करिब १२ कि’लोमिटरको दू’रीमा छ। महानगरभित्रका ए डिभिजन क्लवलाई महानगरले बा’र्षिक १० लाख दिने गरेको छ। नेपाली फुटबलको विकास, विस्तार र कार्यक्र’मबारे मेयर बालेनसँग सहकार्य गर्न तयार रहेको एन्फामा वंरिष्ठ उपा’ध्यक्ष रंहेका नेम्बाङले बताए।
‘हामी महानगरमा फुटबलको विकास र कार्यक्रममा सञ्चालनमा सहकार्य गर्न तयार छौं। सुशासन, आर्थिक पारदर्शीता, विकेन्द्रकरणलाई व्यव;हारमा ला’गू गर्दै नेपाली फु:टबललाई अगाडि बढाउन चाहन्छौं,’ उनले भने।
यो पनि..धरान: मेयर हर्क साम्पाङ खानेपानीको स्रोत जलाधार क्षेत्र जोगाउन र धराने जनतालाई पानी खुवाउने अभियानमा छन् । यसको लागि उनी पानीको स्रोत थप्न मात्र होइन, स्रोत बढाउन जलाधार क्षेत्र जोगाउन पनि लागिपरेका छन् ।
उनको यही अभियान अन्तर्गत आज (शनिबार) धरान ४ स्थित जलाधार क्षेत्रमा पर्ने छोटीमोरङमा वृहत वृक्षारोपण कार्यक्रम भयो । सिरिस, चिउरी, स्वामीलगायत २ सयको हाराहारीमा विरुवाहरु रोपिएको थियो ।
मेयर साम्पाङको आह्वानमा सेवक अभियान, धरान साइक्लिङ संघ, सेवक अभियान, सुनौलो आमा समुह धरान ८, सचेत धराने समुहलगायत विभिन्न संघसंस्थाहरुको पनि सहभागिता रहेको थियो । यसअघि पनि मेयर साम्पाङको नेतृत्वमा धरान वडा नं २० मा खानेपानीको मुहान क्षेत्रमा वृहत वृक्षारोपण कार्यक्रम भएको थियो ।
मेयर साम्पाङले जलाधार क्षेत्र जोगाउन र पानी स्रोत बढाउनको लागि वृक्षारोपण गरिएको बताए । उनले प्रकृति जोगाउनु पर्ने बताउदै प्रकृति जोगाउनु नै पनि विकास भएको बताए । उनले जलाधार क्षेत्रलाई मानव प्रवेश निषेध क्षेत्र बनाउने पनि बताए । धरान उपमहानगरको वातावरण शाखा प्रमुख भेषराज घिमिरेले रोपिएको विरुवाहरु संरक्षणमा पनि ध्यान दिने बताए ।
उनले श्रमदान गर्न आह्वान गर्दा सयौंले साथ पनि दिएका छन् । शनिबार दिउँसो करिब १२ बजे पकुवा खोलामा मेयर साम्पाङसँगै धरानका जनताहरु पनि पुगे । मेयर साम्पाङले आफै ढुंगा बोके, गैतीले खने, र बेल्चाले ढुंगामाटो फाले । उनको अभियानलाई युवा, महिला सबैले साथ दिए ।
धरानका व्यवसायी तथा साइक्लिष्ट कुन्दन श्रेष्ठले मेयर साम्पाङको जोश देखेर साथ दिन आएको बताए । यस्तै, पर्यटनकर्मी रामप्रसाद राईले पनि धरान निर्माण गर्ने राम्रो कामलाई साथ दिन आएको बताए । गायक तथा कलाकार भक्तिराज राईले पनि जो सुकैले गरेको राम्रो कार्यमा सबैको समर्थन हुने र आफु पनि मेयर साम्पाङलाई साथ दिन श्रमदानको लागि आएको बताए ।- क्लिकधरानबाट।
उनले भर्खरै एउटा स्टाटस लेख्दै भनेका छन्… धरान बनाउनलाई पसिना बगाउने सबैलाई हार्दिक धन्यवाद ! भोलि, पर्सी… दैनिक काम गर्दैछौँ ! सबै जना आइदिनु होला ! धन्यवाद !
Prevभन्सार छली ल्याइएको २ ट्रक रसायनिक मल दिउँसै धादिङका किसानले यसरी लुटे (भिडियो सहित)
Nextकांग्रेस महामन्त्री समेत रहेका नेता गगन थापा प्रधानमन्त्रीको तयारीमा !
धरानका मेयर हर्क साम्पाङ फिल्डमा उत्रिएपछि शुरु भयो खानेपानीको पम्प मर्मत काम देखी सरसफाइ सम्म..